WordPress: Mawduucyada ugu Fiican iyo Waxyaabaha Ugu Wanaagsan ee 2019 | Laga soo bilaabo Linux
WordPress: Mawduucyada ugu Fiican iyo Plugins ee 2019
Mid ka mid ah sababaha dadku u jecel yihiin WordPress CMS (WP) tanina waa mashquul mid ka mid ah meelaha ugu horreeya liiska CMS-ga ugu wanaagsan maanta, waa sababta oo ah si buuxda ayaa loo habeyn karaa.
Tani badanaa, mahadsanid taageerada ay siiso adeegsiga mawduucyada (mawduucyada) iyo waxyaabo lagu daro (plugins) ay leedahay bulshada ama cid saddexaad. Labada shayba waxaa lagu muujiyey kuweena hordhac y segunda dheji ku saabsan WP.
In kasta oo loogu talagalay kuwa iyagu leh shabakadooda gaarka ah ee WP, u samee degelladaada cajiibka ah si fudud oo dhaqso leh iyadoo la adeegsanayo buug-yaraha ku dhowaad aan xadidnayn ee mawduucyada iyo fiilooyinka, ma ahan wax dhibaato leh, isticmaalka waxyaalahan lagu daro kuwa leh degellada internetka lagu marti geliyey WordPress.com haa waxay ahayd ilaa dhowaan.
Maanta barxaddan daabacaadda websaydhkan horeba waxay u dhistay taageero kumanaan mowduucyo dhinac saddexaad ah iyo fiilooyin (bilaash iyo lacagba), qaar ka mid ah qorshooyinkaaga lacag bixinta ah. Qoraalkan waxaan rajeyneynaa inaan ku siino hage gaaban midka ugu wanaagsan ama kan ugu caansan ee loo isticmaalo qof walba ka helitaankiisa iyo tixgelintiisa.
Kahor muujinta kuwa ugu caansan, caanka ah, mawduucyadii dhowaa iyo wixii la mid ah, oo bilaash ah oo la bixiyo, oo laga baxo ama laga baxo barnaamijka WP, way fiicantahay in la cadeeyo inay tahay Mowduuc iyo Plugin ku dhex jira barxadan daabacaadda websaydhka weyn ee aadka loo adeegsado.
1 Waa maxay Mawduuca?
2 Waa maxay Plugin?
2.1 Qorshaha aasaasiga ah
2.2 Qorshaha Bilaashka ah
2.3 Qorshaha ganacsiga
3 Featured, caan ah oo dhowaan ah
3.1.5 Kala sooc leh tixgelin gaar ah
3.2.4 Horumarinta beta
3.2.5 Kala sooc leh tixgelin gaar ah
Waa maxay Mawduuca?
Mawduuc ka mid ah qayb kasta oo ka mid ah software-ka waxaa badanaa loo tixgeliyaa a set ah walxaha muhiimka ah ee laxiriira bilicsanaanta gaarka ah iyo qaababka naqshadeynta horay loo sii qeexay, taas oo gebi ahaanba bixisa muuqaal muuqaal ah oo muuqaal ah, taas oo iyaduna, badanaa la xiriirta astaanta muuqaalka sheyga.
WP gudaheeda mawduuc waxaa lagu qeexi karaa:
Qeybo faylal ah oo ka kooban lambarro kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho muuqaalka bogagga iyo baloogyada. Taasi waa, iyagu waa cunsurro lagu dhex daray qalabka gudaha ee bogagga shabakadda, taas oo iyaduna, aasaaskeeda dhidibbada u astaameysa qaabaynta iyo qaabaynta walxaha kugu dhex jira, laga soo bilaabo qaababka qaab qoraalka ee qoraallada, cabirka xarfaha ama midabada, sawirrada asalka ah, iskuxirayaasha ama aaladaha kala duwan ee ka kooban bilicsanaanta guud.
Isticmaalidda mawduuc ku habboon websaydhkeennu wuxuu noqon karaa mid waxtar leh iyo / ama faa'iido u leh sababaha soo socda ee ah in la tixgeliyo
Badanaa si dhakhso ah oo fudud ayaa loo rakibaa daqiiqado gudahood.
Badanaa uma baahna fikradaha barnaamijyada ama horumarinta websaydhka.
Waxay u oggolaanayaan inay la qabsadaan sharraxaadda mashruuca websaydhka qaybta suuqa ama qaybta akhristaha, ee isla mawduuca.
Waxay fududeeyaan in la xoojiyo dhinacyada muuqaalka lagama maarmaanka ah, sida walxaha multimedia, naqshadeynta ugu yar iyo is-dhexgalka shabakadaha bulshada.
Waxay u oggolaadaan mashruucyadayada shabakadda inay si dhakhso leh ula qabsadaan Naqshadeynta Jawaabta, si markaa si raaxo leh looga daawado nooc kasta oo qalab ah.
Waxay oggol yihiin adeegsiga aaladda elektiroonigga ah ee fududeysa abaabulka qaab-dhismeedka iyo habeynta qaybaha mashruuca websaydhka.
Gaaban, xulashada iyo adeegsiga mawduuca ugu habboon ee WP wuxuu kaa caawinayaa inaad daryeesho sharraxaadda mashruuc kasta oo websaydh ah oo waxaad siisaa aragti muuqaal ah martiyadeena iman kara, isticmaaleyaasha, xubnaha iyo macaamiisha, taas oo markaa loo turjumi karo fursado ganacsi oo la iibsan karo.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaan iska ilaalinaa isticmaalka mowduuc ka buuxa hawlo dheeri ah ama xad-dhaaf ah, maaddaama kuwani ay tahay in lagu daboolo waxyaabo dheeri ah, maaddaama isku-dhafka astaamaha muuqaalka iyo shaqeynta mawduuca dhexdiisa ay nagu qasbi karaan inaan guursano mawduucaas gaarka ah muddo dheer.
Waa maxay Plugin?
Sidoo kale loo yaqaan 'plugins', guud ahaan ereyada 'plugin' waa wax aan ka badneyn a gabal ama qayb ka mid ah koodhka loo sameeyay si loo kordhiyo hawlaha barnaamij ama qalab. Taasi waa, waxay ka caawineysaa SW inay hesho fursado badan iyada oo lagu darayo hawlo badan.
Sidaa awgeed, inbadan oo lagu daro, xarumaha badan ee la heli karo ayaa la heli doonaa si loogu deeqo dadka isticmaala ee adeegsada, iyada oo aan loo baahnayn SW kale oo dibedda ah si ay u fuliyaan waxqabadyo ama hawlo la sheegay. Taas oo ah hab wanaagsan oo lagu soo wada koobi karo hal meel.
Hadafka plugin ka sokow ballaarinta xarumaha ama shaqooyinka SW, waa u fududee shaqada kuwa u soo jeedsada, maaddaama kuwan ay tahay inay dadajiyaan shaqada isla mar ahaantaana, siiyaan tayada hawlgalka lagama maarmaanka u ah fulinta howlaha loo igmaday, sidaas awgeedna looga fogaado inay ku rakibmaan barnaamijyo badan.
WP gudaheeda shey ayaa lagu qeexi karaa:
Jajabyo koodh fudud ama isku-dhafan (barnaamij-yar) oo kordhiya shaqooyinka iyo astaamaha mashruucyadeena guud iyo guud ahaan hagaajinta WordPress dhammaan dhinacyada.
Waxqabadyadan iyo sifooyinkaani badanaa waa:
Ka fogow spam
Badeecadaha ganacsiga (elektarooniga ah)
Isku cadaadi sawirada
Hagaajinta SEO-ga boggeena
Samee nuqullo gurmad ah
Samee suuqgeynta boostada
Maaree shabakadaha bulshada
Hagaajinta Amniga iyo Isku-socodka Webka
Qaar badan oo ka mid ah, maaddaama noocyadu ay aad u ballaadhan yihiin suurtagalnimaduna aan dhammaad lahayn. Inkasta oo kuwa isticmaala WordPress.com, ayaa yiri madal wuxuu si toos ah u daboolayaa shaqooyinka soo socda iyada oo loo marayo fiilooyinka caadiga ah, iyadoo kuxiran qorshooyinka la xushay:
Tirakoobka WordPress.com (Nooca Falanqaynta Google)
SEO Muhiim ah (Naqshadeynta Mashiinka Raadinta)
Qolalka sare (mosaics, bandhigyo, iyo kuwo kale.)
Shabakadaha bulshada (badhanka warbaahinta bulshada ee boostada iyo bogagga)
Foorm dhise (Foomamka Xiriirka)
Customizer la dheereeyey
Qalabka la dheereeyay (sida Flickr, Eventbrite, Calendar Google, Twitter, iwm.)
Akismet (Nabadsugida anti-spam sare)
Kaabta iyo dhoofinta
Koodhadhka gaaban ee la dheereeyey (Video, audio, iyo kuwo kale.)
Duudduub aan dhammaad lahayn
Diiwaangelinta emaylka (Raac badhanka)
Faallooyinka horumarsan (Sida ikhtiyaariga ah ee faallooyinka, sheegidda isticmaalaha, ogeysiisyada, iwm.)
Sida xulashada (Qoraalada)
Gelinta (Laga soo bilaabo Facebook, Twitter, Instagram, iyo kuwo kale.)
Naqshadeynta Gaarka ah (Fontsyada gaarka ah, Tifatiraha CSS, iyo kuwo kale.)
Fiidiyowga la soo galiyay
Ka saarida xayeysiinta
Featured, caan ah oo dhowaan ah
Imisa Mawduuc iyo Plugins ayaa la heli karaa oo loo isticmaali karaa goob kasta oo WP ah waxaan ku xusi doonnaa 3 qeyb kasta oo waxaan si gaar ah u xusi doonnaa u adeegid sidii hagaha akhriska iyo cilmi baarista qof kasta.
Labaatan iyo sagaal iyo toban
Labaatan iyo Toddoba iyo toban
Kala sooc leh tixgelin gaar ah
Nidaamka Google XML
Luqadaha la doorbiday
Burburinta Sawirka Sawirka iyo Wax-u-hagaajinta
W3 Wadarta keydka
Iskuxirka muuqaalka (WPBakery Bog Dhise loogu talagalay WordPress)
Macluumaadka Sharciga Kukiyada (GDPR Oggolaanshaha cookie)
Run ahaantii SSL sahlan
Sida aan u aragno, WordPress qaabkeeda aasaasiga ah, taas oo ah, la soo dejiyey oo lagu rakibay qaab codsi toos ah loogu shaqeynayo server-yadayada ama qaabkeeda horumarsan, taas oo ah, shaqada qadka tooska ah WordPress.com waa madal aad u fiican oo daabacaadda websaydhka ah oo noo oggolaanaysa oo keliya inaan ka horumarinno bogagga internetka ee fudud illaa mashruucyada casriga ah iyo kuwa adag ee shabakadaha.
Marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan si tartiib tartiib ah kor ugu qaadno horumarkooda iyadoo la adeegsanayo mowduucyada iyo fiilooyinka kuwaas oo isku daraya sifooyin aan badnayn iyo hawlo dheeri ah oo uqalma degel kasta iyo mashruuc websaydh ah oo urur weyn, ha ahaado mid dawladeed ama mid gaar loo leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » WordPress: Mawduucyada iyo Plugins ee 2019
Diiwaanka Xidhmada Adeegga GitHub oo ah adeeg la jaan qaada NPM, Docker, Maven, NuGet iyo RubyGems